इतिहासको भद्दा मजाक – eratokhabar
इतिहासको भद्दा मजाक
देशभक्त/क्रान्तिकारी माइला लामाको हातमा हतकडी :
ई-रातो खबर २०७६, २२ साउन बुधबार १२:४५ August 7, 2019 1363 Views
हुनत जेल क्रान्तिकारीहरूका लागि एउटा मोर्चा पनि हो । केपी, प्रचण्ड र बादलहरूको शासनमा जेल सुदर्शन र माइलाहरूका लागि सही बासस्थल पनि हो । त्यही नख्खु जेलमा नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवम् जनयुद्धका अर्का माक्र्सवादी स्रष्टा/विचारक सुदर्शन पनि पाँच महिनादेखि पुर्पक्षकै लागि थुनिएका छन् । अन्य सयौँ कमरेडहरू देशद्रोहकै मुद्दामा जेल र हिरासतमा कैदी/बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् । सुदर्शन र माइलाहरूमाथि अभियोग छ– उनीहरूले यो व्यवस्था, यो संविधान, यो सरकार, तिनका नीति, कार्यक्रम र नेतृत्व अस्वीकार गरे । वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन विद्रोह सुरु गरे । एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशामा जनता सङ्गठित गरे । एनसेलका टावरहरू र भ्रष्टहरूमाथि कारबाही गरे । आदि–इत्यादि । विस्तारवादी/साम्राज्यवादी उत्पीडन र थिचोमिचोबाट देशलाई मुक्त पार्नुपर्छ, दलाल पुँजीवादी शोषण–उत्पीडनबाट जनतालाई मुक्त पार्नुपर्छ भनेर निजी स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिँदै दिनरात आन्दोलनमा होमिने सुदर्शन र माइलाहरूले देशद्रोहीको पगरी लगाएर जेलमा सड्नुपर्ने अनि सत्ताका लागि वर्ग, देश र आदर्श भुलेर साम्राज्यवादका सामु लम्पसार पर्ने केपी वली र पुष्पकमल दाहालहरू राष्ट्रनायक हुने/भनिने हददर्जाको भद्दा मजाक समाजले बेहोरिरहेको छ । कलाविहीन नाटकको यो दृश्य लामो समयसम्म रहनेछैन तर पनि देशभक्त र क्रान्तिकारीहरूमाथिको यो अपमान सहन स्वयम् मातृभूमिलाई पनि पलपल गाह्रो भइरहेको हुनसक्छ ।
फोहोर गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेजस्तो केपी–पीके र रामबहादुरहरूले अझ पनि आफूलाई कम्युनिस्ट हौँ भनिरहेका छन् । उनीहरू समाजवाद ल्याउन कसरत गरिरहेको पनि बताइरहेका छन् । अझ उनीहरूसँग यही संसदीय व्यवस्थाको सजिलो दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पनि छ तर उनीहरूलाई देशको विकास गर्न, जनतालाई सुख दिन केले छेकेको छ ? सिंहदरबार गाउँमा पु¥याउँछौँ भन्दै मत माग्न गाउँ पुगेका केपी र प्रचण्डहरूले सिंहदरबारको चरम भ्रष्टाचार, बेथिति र भाँडभैलो गाउँमा पु¥याएका छन् । भ्रष्टाचारले देश खतम भइसकेको छ । इतिहासमै सबैभन्दा बढी राष्ट्रघात–जनघातका शृङ्खलाहरू मच्चिइरहेका छन् । हत्या, बलात्कार र तस्करी नभएको पल नै छैन । शासकहरूले आफू र आफ्ना आसेपासेहरूका लागि सुविधाको चाङ लगाएर जनताका नाममा गरिबी, अन्याय, अत्याचार, भोकमरी र शोषणको उरुङ लगाएका छन् । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयहरूलाई लिएर सङ्गठन र आन्दोलन पनि गर्न नपाउनु भनेको राणाकाल, पञ्चायतकाल वा शाहीकालको पुनरावृत्ति हो । यस्तो अवस्थामा झन्डै हजारको सङ्ख्यामा नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरू हिरासत र जेलको छिँडीमा कैदी र बन्दी अवस्थामा छन् । नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । देशलाई साम्राज्यवादी स्वार्थ र थिचोमिचोहरूबाट मुक्ति दिने र जनतालाई गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने सरकारका विरुद्ध को रहरले विद्रोह, युद्ध र क्रान्तिमा लाग्छ र ? विद्रोहमा सामेल भएर जीवन गुमाउन कसलाई रहर छ ? तर केपी–पीकेहरू आफूले गरेको सत्ताको ब्रह्मलूटलाई सबैले ‘रामराज्य’ भनिदिनुपर्छ भन्ने मूढाग्रह पालेर विरोधीहरूमाथि दमनचक्र चलाइरहेका छन् । एकीकृत जनक्रान्तिको यो समयमा दस जना होनहार युवाले बलिदानको कोटा चुक्ता गर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्था र व्यवस्था गलत छ भन्ने, नाफाबट तिर्नुपर्ने कर मात्र झन्डै एक खर्ब तिर्न बाँकी रहेको एनसेल नाउँको सञ्चार कम्पनीबाट कर उठाऊ भन्ने, भ्रष्टाचार र तस्करी बन्द गर भन्ने, महँगी नबढाऊ, जनतालाई कामका लागि अर्काको देशमा जान बाध्य नपार भन्ने पार्टी र नेताहरूमाथि गोली दागेर यो सरकारले दैनन्दिन आतङ्क र भय उत्पन्न गरिरहेको छ । यस्तो अवस्था नाङ्गो बादशाहलाई नाङ्गै देख्ने र भन्ने सुदर्शन र माइलाहरूको हातमा हतकडी र खुट्टामा नेल देख्ने अवस्था उत्पन्न हुनु कुन नौलो कुरा भयो र ! जेलभित्रैबाट माइलाले वर्तमानको कुरूप चित्रण यसरी गरेका छन् :
कमरेड माइला लामा एकीकृत जनक्रान्तिका मात्र होइन, महान् जनयुद्धका पनि सशक्त योद्धा हुन् । जनयुद्धको पहिलो सफल फौजी मोर्चा रामेछाप बेथान पानीघाटको लडाइँमा उनी छापामार योद्धा थिए । जनयुद्धकै क्रममा उनी विस्फोटमा परे र श्रवणशक्ति, दृष्टिशक्ति र हृदयको धड्कन÷स्पन्दन शक्ति गुमाए, छियाछिया पारे । बमबारुदमा परेर कयौँ मिटरमाथि आकाशसम्म पुगेर धर्तीमा पछारिँदा पनि उनले होस र धैर्य गुमाएनन् । फलतः उनी इस्पातजस्तै धारिला भएर विचार, सिर्जना र राजनीतिक आन्दोलनमा खटिरहे, लागिरहे । माइला कहिल्यै पुरातन सत्ताको चास्नीमा लोभिएनन् । सिङ्गो पार्टी संविधानसभामा होमिएको समयमा काठमाडौँ– ९ मा सभासद् उम्मेदवार बनेका लामा अत्यन्त झिनो मतले पराजित भए पनि क्रान्तिकारी राजनीतिक आन्दोलनमा रत्तिभर पराजित भएनन् । प्रचण्डको संशोधनवादी गद्दारी रवैद्य समूहको छद्म संशोधनवादी अकर्मण्यतावादका विरुद्धको विद्रोहमा उनले अग्रमोर्चामा रहेर क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणका लागि पहल गरे । फलस्वरूप उनी नेकपाको केन्द्रीय सदस्य, अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घको अध्यक्ष र नेकपा उपत्यका विशेष ब्युरो इन्चार्जजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर जनक्रान्तिको मोर्चा समालिरहेका थिए र साथमा क्रान्तिकारी आशावादले ओतप्रोत सिर्जना पनि गरिरहेकै छन् । यसैबीच मध्यरातमा दुस्मनले उनलाई बिस्तराबाटै गिरफ्तार ग¥यो जसरी ऋषि देवकोटा ‘आजाद’ लाई पञ्चायती शासकहरूले घेरा हालेर गिरफ्तार गरेका थिए । भीमदत्त पन्तलाई भारतीय सैनिक लगाएर गिरफ्तार गरेका थिए । चे ग्वेभारा, चारु मजुमदार र गोन्जालोलाई फासिवादी शासकहरूले जसरी समातेका थिए, माइला लामालाई पनि शासकहरूले त्यसैगरी झुक्याएर समाते र हतारहतार जेल पठाए । देशभक्त÷क्रान्तिकारी माइला लामाहरू जेल बाहिर रहनु केपी वली, पुष्पकमल दाहाल र रामबहादुर थापाहरूका लागि खतराको घन्टी बज्नु हुन्थ्यो । किनकि माइला लामा जनताको मन छुने गीत लेख्थे र सङ्गीत भर्थे । देश दुखेको गीत लेख्थे र देश बचाउन अमरसिंह, भीमसेन र बलभद्र बन्ने उत्साह भर्थे । कालापानी बेच्ने, महाकाली बेच्ने, लिपुलेक, अरुण, सप्तकोसी र कर्णाली बेच्ने केपी, पीके र रामबहादुर थापाहरूका लागि माइला लामाहरूका देशभक्तिका गीतहरू आतङ्कवादी, राष्ट्रद्रोही र आपराधिक हुनु स्वाभाविक थियो । झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ बराबर नेपालको राजस्व लुटेर फरार रहेको एनसेलका टावरहरू नेपाल र नेपालीका लागि खतरनाक छन् भनेर विद्रोहको दुन्दुभि बजाउने माइला लामाहरूका आवाजहरू कृष्णलाल, गङ्गालाल, भीमदत्त र कृष्ण सेनहरूका जत्तिकै ‘देशद्रोही’ थिए । जनतालाई खाना, नाना र झुप्रोछाप्रोको माग गर्ने माइला लामाहरू आतङ्ककारी नभएर के तराई विखण्डनको माग गर्दै भारत र पश्चिमाहरूसँग मिल्ने सीके राउतहरू विखण्डनकारी र देशद्रोही हुन सक्छन् त यो दलाल फासिवादी सरकारका लागि ?
सङ्घर्षमा उत्रिने अखिल नेपाल किसान महासङ्घको चेतावनी (विज्ञप्तिसहित)